भगवान श्रीकृष्ण महान वाणीहरु - Mitho Khabar
June 20, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on भगवान श्रीकृष्ण महान वाणीहरु
प्रेरक भन्नुको अर्थ के हो ? पक्कै पनि प्रेरक भन्नुको अर्थ यस्ता कुराहरु जसले हाम्रो भावना बुझेको प्रतित हुन्छ । यहाँ त्यस्तै ७ भनाइहरु राखिएको छ जसले हाम्रो भावना बुझ्छ । हाम्रो आदर्शका कुराहरु गर्छन् र हामीलाई केहि ज्ञान दिन्छन् ।
तपाईलाई यी ७ महान् भनाईहरु पढ्दा कस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला । मन परेमा तपाईले यसलाई सेयर गर्न पनि सक्नु हुन्छ । हामी सकारात्मक सोचमा यस्तै मन छुने तथा जीवन बदल्ने कुराहरु लेखिरहेका हुन्छौँ ।
श्रीकृष्णलाई विष्णु भगवानको अवतारका रुपमा लिइन्छ । उनै भगवान श्रीकृष्णलाई नीतिज्ञ, शक्तिमान, वौद्धिक, तार्किक क्षमतावानका हिसावले सर्वश्रेष्ठ पनि मानिन्छ । यतिमात्र होइन, श्रीकृष्णलाई निकै रसिक पात्राको रुपमा चित्रित गरिन्छ । १६ सय गोपिनीहरुको सारी लुकाउनेदेखि राधासँगको सम्बन्धमा पनि उनको भूमिका निकै रसिक मानिन्थ्यो । हिन्दू धर्म ग्रन्थका अनुसार, उनमा अरुलाई प्रेरित, प्रोत्साहित गर्न सक्ने अलौकिक क्षमता थियो ।
– कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले नै रणनीति तयार गर्नुस् ।
– यदि बिरोधीहरु सक्रीय बने या बलिया बने भने त्यो अवस्थामा विजय प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले कुटनीतिको बाटो अपनाउनुपर्छ ।
– कहिल्यै पनि अरुको बिचारको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन, बरु तपाई स्वंम बिचार विकसित गर्नुहोस् ।
– साँचो मित्रता चाहनुहुन्छ भने गरिब र धनीको भेद नगर्नुहोस् । बरु, इमान्दारी र सत्यताको भने सधैं ख्याल गर्नुहोस् ।
– तपाईंमा दुरदर्शीता र हरेक परिस्थितीको आकलन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।
– समस्यासँग हटेर होइन, डटेर सामना गर्नुहोस् ।
– अस्तव्यस्त होइन, सँधै अनुशासित जीवन जिउनुहोस् अनि व्यर्थको कुरालाई लिएर कहिल्यै पनि चिन्ता नगर्नुहोस् । बर्तमानमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्नुहोस् ।
प्रेरक भिडियो हेर्नुहोला :
हिजोआज मानिसहरु आफ्नो शरीरको तौलको विषयलाई लिएर धेरै चिन्तित हुन थालेका छन् । कतिपय मानिसहरुको तौल उचाई अनुसार मिल्दैन । कसैको उचाई अनुसार तौल नै पुग्दैन त कसैको धेरै भईदिन्छ । धेरै मानिसहरुको उचाई अनुसार उत्तम तौल हुँदैन ।
विशेषज्ञको अनुसार बडी मास इन्डेक्स बीएमआईले स्वस्थ मानिसको उचाइअनुसारको वजन कति हुनपर्छ भन्ने जनाउँछ । बीएमआई निकाल्नको लागि मानिसको उचाइ मिटरमा र तौल किलोमा नाप्नुपर्छ । अब उचाइमा आएको मिटरलाई दुई पटक गुना गरेपछि आउने प्रतिफलले तौललाई भाग गर्दा आउने अंक बडी मास इन्डेक्स हो ।
२४.९ सम्मको बडी मास इन्डेक्सलाई सामान्य मानिन्छ, २५ देखि २९।९ सम्मलाई ओभरवेट अर्थात् मोटोपना भएको मानिन्छ भने ३० देखि माथि देखिएमा अत्यधिक वजनदारमा गनिन्छ । तर दक्षिण एसियाका जनताको खानपान, शारीरिक बनावट आदिको आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अलग्गै बीएमआई निर्धारण गरेको छ । दक्षिण एसियाका मानिसका लागि १८.५ देखि २२.९ सम्म सामान्य, २३ भन्दा माथि गएमा बढी तौल भएकोमा गनिन्छ ।
कस्को बीएमआइ कति हुनुपर्दछ ?
१८.५ भन्दा कम बीएमआइ हुने व्यक्तिलाई ‘दुब्लो’ भनिन्छ।
१८.५ देखि २५ सम्मको बीएमआइ हुनेलाई ‘उत्तम तौल’ भएको व्यक्ति भनिन्छ।
२५ देखि ३० सम्मको बीएमआइ हुनेलाई ‘अधिक वजन’ भएको व्यक्ति भनिन्छ।
३० भन्दा बढि बीएमआइ हुनेलाई ‘अति मोटो’ भनिन्छ।
बीएमआइ अनुसार उचाईअनुसार मानिसको उत्तम तौल यस्तो हुनपर्छ ?
४ फिट ६ इन्च उचाई भएको पुरुषको २८ देखि ३५ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको पनि २८ देखि ३५ नै हुनुपर्छ
४ फिट ७ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ३० देखि ३९ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको ३० देखि ३८ केजीको हुनुपर्छ ।
४ फिट ८ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ३३ देखि ४० केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको ३२ देखि ४० केजीको हुनुपर्छ ।
४ फिट ९ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ३५ देखि ४४ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ३५ देखि ४२ हुनुपर्छ ।
४ फिट १० इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ३८ देखि ४६ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ३६ देखि ४५ केजीको हुनुपर्छ ।
४ फिट ११ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ४० देखि ५० केजी हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ३९ देखि ४७ केजीको हुनुपर्छ ।
५ फिट उचाई भएको पुरुषको तौल ४३ देखि ५३ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ४० देखि ५० केजीको हुनुपर्छ ।
५ फिट १ फिट उचाई भएको पुरुषको तौल ४५ देखि ५५ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ४३ देखि ५२ केजीको हुनुपर्छ ।
५ फिट २ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ४८ देखि ५९ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ४५ देखि ५५ केजीको हुनुपर्छ ।
५ फिट ३ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ५० देखि ६१ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ४७ देखि ५७ केजीको हुनुपर्छ ।
५ फिट ४ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ५३ देखि ६५ केजी हुनुपर्छ भने महिलाको ४९ देखि ६० केजीको हुनुपर्छ ।
५ फिट ५ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ५५ देखि ६८ र महिलाको ५१ देखि ६२ केजीको हुनुपर्छ ।
५ फिट ६ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ५८ देखि ७० केजी र महिलाको ५३ देखि ६५ केजी सम्मको हुनुपर्छ ।
५ फिट ७ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ६० केजी देखि ७४ केजीसम्मको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ५५ देखि ६७ केजी सम्मको हुनुपर्छ ।
५ फिट ८ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ६३ केजी देखि ७६ केजी सम्मको र महिलाको तौल ५७ देखि ७० केजी सम्मको हुनुपर्छ ।
५ फित ९ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ६५ देखि ८० केजी र महिलाको ५९ देखि ७२ केजी सम्मको हुनुपर्छ ।
५ फिट १० इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ६७ देखि ८३ केजीको हुनपर्छ भने महिलाको तौल ६१ देखि ७५ केजी सम्मको हुनुपर्छ ।
५ फिट ११ इन्च उचाई भएको पुरुषको तौल ७० देखि ८५ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ६३ देखि ७७ केजी बराबरको हुनुपर्छ ।
६ फिट उचाई भएको पुरुषको तौल ७२ देखि ८९ केजीको हुनुपर्छ भने महिलाको तौल ६५ देखि ८० केजी बराबरको हुनुपर्छ ।
तपाईको तौल कति छ ? जान्नुहोस् उमेरअनुसारको तौल कति हुनुपर्छ (उपयोगि टिप्ससहित )
मेडिकल दुनियामा साधारणत: उमेर अनुसार तौल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
जस्तो कि कुनै महिला गर्भवती छन् भने उनको पेटमा बढ्दै गरेको बच्चा हप्ता अनुसार कति बिकास भईरहेको छ हेर्ने गरिन्छ, जब बच्चा जन्मन्छ तब पनि बच्चा कति महिनामा कति तौलको भयो र तौल अनुसार कति स्वस्थ छ भन्नेबारे विश्लेषण गरिन्छ ।
बिशेषगरि जन्मदादेखि १८ बर्षसम्मको मानिसमा सारीरिक तौलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
कुन उमेरका मानिसको तौल औशत कति हुँदा राम्रो हुन्छ ?
घरमा यस्ता गुण भएकी नारी छिन् भने घर स्वर्ग समान हुन्छ